Ukwenzakala Kunye Nokubuyiselwa Kwimeko Yesiqhelo | Isilimela 2022
Eyona mithambo iphambili yokuphucula indlela yokuma komzimba (ilula kwaye isebenze)
Ukuma kakubi kukwenza ubonakale ungathandeki kwaye imbi kwimpilo yakho. Ukuba ulandela le mithambo ili-7 ukuphucula ukuma komzimba, uya kujongeka kwaye uzive ungcono.
Indlela yokuLahla izihlunu eziKhawulezayo (yintoni esebenzayo kunye neNgasebenziyo)
Ukuphononongwa kweentsomi malunga nokuchacha kwimisipha ebuhlungu, kunye nokucacisa eyona nto isebenza ngokukuko ukuphelisa ukukhathazeka kwezihlunu. Sigubungela ukutya, ukulala, ukwenza imithambo nangaphezulu!
Izizathu ze-12 zeNhlungu ezisezantsi eziseMva (kwaye ungazikhulula njani)
Ngaba unengxaki yokuqaqanjelwa ngumqolo osezantsi? Fumana unobangela weentlungu zakho ezisezantsi ngasekunene kwaye ushukumise iintlungu zakho zangasemva ngamayeza asekhaya.
I-10 yeedolo ezolula ukukhululeka kwamadolo
Ukudibana kwamadolo yenye yezona zinto zibalulekileyo kulwakhiwo lwethu. Ziqhelise la madolo ali-10 azolulela zombini ukukhusela iintlungu emadolweni kunye nokuphucula impilo yamadolo.
I-7 Eyona Ndlela ilula yokuLula ubuNhlungu
Amanqanaba amaninzi asezantsi angasemva anokunceda ukukhulula izihlunu. Apha siza kudlula kwezona ndawo zisemgangathweni zilungileyo zokunceda ukuguqula ubomi bakho.
Unyango olukhawulezayo olusisixhenxe semisipha etyaliweyo entanyeni
Ngaba unesihlunu esitsaliweyo entanyeni? Eli nqaku liza kujonga ukuba kutheni unezihlunu ezitsaliweyo entanyeni yakho kunye nendlela yokuphumla (kunye nokuthintela) iintlungu.
Eyona ndlela yokulala yokuNceda ukuXhasa iZifo ezisixhenxe eziqhelekileyo
Ngaba ulele kwindawo efanelekileyo? Ukuba uvuka ngeentlungu ezisemqolo okanye igxalaba elixineneyo, uya kufuna ukuyifunda le nto kwaye ufunde eyona ndlela yokulala.
Ulala njani ngePain Back Back Usebenzisa ezi ngcebiso zili-13
Ukuchitha iiyure zakho zokuvuka kwiintlungu kubi ngokwaneleyo. Ukungalali ngenxa yeentlungu ezisezantsi kunokukushiya udiniwe kwaye useneentlungu. Ukucinga ukuba ulala njani nentlungu esezantsi? Fumanisa ukuba ungenza ntoni.
I-12 yokuQeqesha okuQinisekayo kokuBuyisa ukuNceda iintlungu ezisezantsi
Iintlungu ezisezantsi akufuneki zinciphise imisebenzi yakho. Khetha kule mithambo yomelezayo kwaye usebenze ukuze ususe ukungonwabi kwakho. Nguwuphi oya kuthanda y
Ungabuthintela njani ubuhlungu beNtamo ekulaleni (kunye noLungiso olukhawulezayo lokukunceda)
Intlungu yentamo yokulala inokumosha usuku lwakho ngaphambi kokuba iqalise. Sebenzisa ezi ngcebiso ukukhusela iintlungu zentamo ekungeneni ebomini bakho.